Ilay resaka tsy tonga volana tamin'ny kabary farany
2021-04-23 @ 20:27 in Politika
Izaho, noho ny safidy politika na noho ny fironana tsotra izao, dia tsy niandry ny kabarin'ny Filoha Mamim-bahoaka tamin'ny fahitalavitra, fa ninia niandry mihitsy ny fahavitany sy ny fanehoan-kevitry ny hafa aloha izay vao nanapa-kevitra ny hihaino, rehefa hitako hoe ilaina izany.
Nisy ary ireo fepetra isan-karazany, ary tao anatin'izany ny fanakatonana ny Fiangonana. Izaho manokana dia tsy resy lahatra amin'ny hoe akatona ny Fiangonana rehefa misy ny fepetra efa noraisina isorohana ny fiparitahan'ny aretina. Izay no antony tiako hihainoana ny kabary amin'izay.
Rehefa nihaino ilay izy tao amin'ny Facebook Live dia nandre fehezanteny iray tsy nisy tohiny ary henoko tsara manao hoe: "tsy maintsy atsahatra ny asam-panakorontanana amin'ny endriny rehetra". Ary dia tapaka hatreo tsy nisy tohiny io resaka io. Izay no anton'ny fanontaniako fa tsy mandehandeha foana izany filazana izany.
Ankehitriny, mazava ny antony ary niomanana ho andro alakamisy mivoaka zoma vao fantatra ny tian-kolazaina. Indreo ary ny tompon'andraikitra nanasonia ny tohin'ilay resaka, tsy nisy nilaza ankoatra ahy rehefa nijery ny randram-baovao matetika aho.
Io ary izy io: tsy ny arovava sy orona intsony no miasa fa ny fanampenam-bava tanteraka, satria misy mariny tsy zaka, misy fepetra voatery noraisina noho ny fitakian'ny olona, ary nisy Orina Mpanasoa an'ny Karana iray lasa nandray ny andraikitry ny governemanta. Dia hitsaha-ketrika hatreo ve ny fahalalaham-pitenenana?
Tsikeritra kely fotsiny, natao ho fanta-bahoaka ny zoma ny resaka satria fantatra fa ny asabotsy sy ny alahady dia tsy misy mahazo mivoaka ny eto amin'ny faritra Analamanga.